Cumar C/rashiid ayaa Farmaajo ku dhaliilay inuu dalka ku soo kordhiyey dhaqan ah hala kala adkaado… – Hagaag.com
Cumar C/rashiid ayaa Farmaajo ku dhaliilay inuu dalka ku soo kordhiyey dhaqan ah hala kala adkaado…
Ra’iisal Wasaarihii hore ee Somalia, Cumar Cabdirashiid Cali Sharmarke ayaa ka hadlay xaaladda siyaasadeed ee dalka, isagoona soo dhaweeyay heshiiskii Dowladda Federaalka iyo Midowga Musharaxiinta ay Khamiistii ku gaareen Magaalada Muqdisho.
Ra’iisal Wasaarihii hore ee dalka ayaa sheegay inay markii ugu horeysay noqoneyso xaaladda xilligan dalka ka taagan, labaatankii sano ee ugu dambeysay ee dib u dhiska Dowladnimada Somalia.
Waxa kaloo uu yiri “Masuuliyadaa ku fareysa in arrimaha wax badan aad ka tagtid, wax badana aad xeeriso, si dalka marna uusan u gelin xaaladda hadda ay taagan tahay.”
“Xoogaa waxaad mooddaa dhaqan ah hala kala adkaado oo runtii ah dhaqan aan Somalia ka shaqayneynin, weliba xaaladda hadda lagu jiro iyo sida dadku u kala daadsan yahay. Muhiimadda ah in dadka iyo dalka la isu soo cesho oo dadka leesku keeno, horta dhaqan noocaas ah mid ka shaqaynayo meeshaan maaha, waana sii kala fogeeyay dadka, oo runtii wuxuu kala gaarsiiyay meel xun. Xaaladda siyaasadeed ee maanta ee dalka waxay mareysaa farta in leesku fiiqo, lees caayo, yacni meel xun oo shakhsiga in la gaaleeyo uun baa dhiman, wax kaloo hadda noo harsan majiraan.” Ayuu yiri Ra’iisal Wasaarihii hore ee dalka, Cumar Cabdirashiid Cali Sharmarke.